Taxanaha maqalka 'Sandman' ee xagaagan ka imanaya Audible iyo DC
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Taxanaha maqalka 'Sandman' ee xagaagan ka imanaya Audible iyo DC
Neil Gaiman ee taxanaha sheeko sawirada, Sandmanka, wuxuu ahaa taageere jecel tan iyo markii ugu horeysay ee la daabaco 1989, iyo Xagaagan, taageerayaasha waxay lahaan doonaan wado cusub oo ay ku raaxeysan karaan astaamahan iyagoo wata cajalad maqal ah oo cusub oo ka timid Audible iyo DC Comics oo uu soo warinayo Gaiman laftiisa.
Waxaa hogaaminaya Dirk Maggs, la qabsiga wuxuu soo bandhigi doonaa nashqad dhawaaqeed xeel dheer iyo maqal hodan ah, oo maqal ah sida ku xusan war saxaafadeed aan hada helnay. Maggs wuxuu la shaqeeyay Gaiman horay wuxuu u abuuray la qabsiga maqalka ee Wiilasha Anansi, Dareen wanaagsan, Marnaba, Iyo Stardust.
Markuu sixir bararku isku dayo inuu soo qabto muuqaalka muuqaalka Dhimashada ee gorgortanka nolosha weligeed ah, wuxuu si khalad ah u dabbaqaa dhimashada Walaalkiis ka yar Morpheus, Boqorka Riyooyinka. Ka dib markii uu xirnaa toddobaatan sano iyo ugu dambeyntii baxsadkiisii, Morpheus wuxuu baadi goob ugu jiraa inuu dib u soo ceshado waxyaabihiisii ​​lumay ee awoodda isla markaana dib u dhisi lahaa boqortooyadiisa. The Sandman wuxuu raacayaa Morpheus, iyo dadka iyo meelaha uu saameynayo, isaga oo isku dayaya inuu saxo khaladaadka cosmiciga iyo aadanaha ee uu sameeyay intii uu noolaa.
Gaiman wuxuu ku lug lahaa tallaabo kasta oo geeddi-socodka ah, isagoo keenaya Sandmanka si loogu noolaado codka maqalka.
Ku dhowaad 30 sano ka hor, Dirk Maggs wuxuu u yimid DC si uu ula qabsado Sandmanka foom maqal ah. Ma aysan dhicin (in kasta oo ay ahayd sida aniga iyo Dirk markii uhoreysay aan u gudubnay) waan ku faraxsanahay inaysan dhicin, maxaa yeelay waxaan ku jirnaa Casrigii Dahabiga ahaa ee Riwaayadda maqalka xilligan, aniga iyo Dirk waxaan aad ugu fiicanahay waxa waan qabaneynaa, ”Gaiman ayaa ku yiri hadal uu soo saaray. “Tani waa la qabsi maqal ah oo hodan ah Sandmanka Novels Graphic, oo si qurux badan u farsameeyay Dirk Maggs, oo leh xiddig dhan. Waxaan jeclaa inaan halkaas u joogo inaan kala hadlo tuurista, halkaas oo aan ku akhriyo qoraallada oo aan ku siiyo talo marmar, halkaasna istuudiyaha, daawashada sixirka la sameeyo iyo duubista sheekada. Ma sugi karo ilaa adduunku maqlo waxa aan qabanay. ”
“Maqalkan maqalka ah ee Sandmanka waa mid baaxad weyn iyo himilo leh oo ku saleysan si gaar ah qoraalada asalka ah ee Neil iyo qoraallada taxanahiisa taxanaha ah ee DC. Wax soosaarkeenu wuxuu si qoto dheer ugu dhaadhacayaa mala awaalka Neil, sida inuu qorayo sheekooyinkan oo dhankeena ah, kor u qaadista faahfaahinta iyo sheekooyinka sheekooyinka yar yar ay ahaayeen ilaa iyo haatan, ”ayuu raaciyay Maggs. “Codka wuxuu si gaar ah u dhameystirayaa mala-awaalka buugaagta ee majaajillada ah 'mala-awaalka aragga iyo hal-abuurka hal-abuurka leh ee Neil, halka jilitaankeenna cajiibka ah iyo muusigga Jim Hannigan ay ku kordhinayaan feker cusub oo shucuur leh. Mashruucan muddadiisu ahayd soddon sano ayaa uqalmay daqiiqad kasta oo la sugo. Waa nuxurka aasaaska Neil Gaiman ee Sandman. ”
Sandmanka waxay ahayd hanti kulul sannadihii la soo dhaafay iyadoo dhowr jeer la isku dayay la qabsi, kuwaas oo intooda badan ay ku guuldareysteen inay mira dhal keenaan – goor dhaweyd ayaa lagu dhawaaqay in Netflix waxay dooratay inay la qabsato muuqaal ah sheekada–Markaa waxay daaweyn gaar ah u noqon doontaa taageerayaasha inay la kulmaan la qabsiga gaarka ah ee shaqada Gaiman.
Waxaad ka hubin kartaa AUDIO CLIP taxanaha cusub adoo adeegsanaya HALKAN HALKAN.
Ma jiro weli wax hadal ah oo ku saabsan filimka taxanaha maqalka. Qaybtii ugu horreysay ee Sandmanka waxaa loo heli doonaa soo degsiinta Xagaaga 2020 oo Ingiriis ah oo lagu sii dayn doono faransiisyo, Jarmal, Talyaani, iyo Isbaanish.
maqalDC lagu qosloDirk MaggsMorpheusNeil GaimanSandmankaWaylon Jordan
'Hocus Pocus 2' wuxuu kahelaa Agaasimaheeda Disney
Scott Derrickson wuxuu la wareegay 'Bermuda' Sam Raimi